Gbasara Anyị - Smart Weigh Packaging Machines Co., Ltd.
Vetikal igwe eji ebu ihe
Rotary mbukota Machine
Onye na-enyocha ihe nyocha
Ngwunye ngwongwo eji ebu ihe
Njem Travellọ Ọrụ
Smart Weigh ọ nyefere igwe eji igwe ihe dị elu karịa mba 65. E guzobere Smart Weigh na 2012 ya na ụlọ ọrụ izizi ya nke dị na Henglan, obodo Zhongshan, Guangdong, China, wee zụọ ahịa na mba ofesi. Ndị guzobere Smart Weigh na-ahụ maka ịhazi igwe, mmemme na ịre ahịa, azụmaahịa ụlọ ọrụ ahụ etoola ngwa ngwa n'ihi nkewa a kapịrị ọnụ, Smart Weigh kwagara na 4500m2 ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ n’afọ 2017.
Smart arọ Packaging Machinery Co., Ltd ka ogologo mesiri inye ọdabara na akpaka erikpu na nkwakọ igwe ngwọta na ezi uche ahịa. Ogo nke igwe a na eme ihe emeela ka ya na ndi ahia anyi adi ezigbo mma. N'otu oge ahụ, anyị bụ isi iyi nke mgbakwunye! Pụtara na anyị na-enye igwe, igwe nkwakọ ngwaahịa, igwe mbuli elu, ihe na-achọpụta ihe, nyocha ngwa ngwa na wdg - Ahịrị ngwakọ zuru oke maka akpa, ite, karama na katọn.
Anyị na-enwe ọ onụ na ịnara ọrụ zuru oke n'okpuru AKWURKWỌ, KWURU NA ỌHNR and!
Anyị na-enyefe ndị ahịa ahịa ihe ị nweta nke ọma na nke kachasị mma mgbe ịre ahịa, hụ na anyị na-egbo mkpa gị maka akpaaka. Dịka onye nrụpụta dị elu na onye na-eweta ihe dị larịị, igwe dị ukwuu, jikọtara weigher vetikal mpempe akwụkwọ mejupụtara igwe mkpuchi igwe, igwe na-ahụ ihe, igwe na-enyocha, na-enyocha ibu na akpaaka na-ejuputa ma na-ejuputa, anyị nwere ekele maka nhọrọ gị ma na-agba mbọ ịmefe ihe ndị ị tụrụ anya. .
ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere teknụzụ dị elu
udiri ihe eji ede ihe otutu
Kwa Afọ ikike nke mbukota akara
24 × 7 awa
Nnwale nke ochie na-eme ka igwe kwụsie ike
Smart Weigh gbarie n ’ihu igwe dị ukwuu maka ụfọdụ nri nri pụrụ iche, dịka kimchi, osikapa e ghere eghe, anụ ezi, salad, mkpụrụ osisi ọhụrụ, anụ, chiiz, achicha osikapa, soseji, agwakọta agịga, kandụl agwakọta na ndị ọzọ. ma nweela ọfụma n’ịhazi atụmatụ igwe ihe na-ebu ngwa ahịa na ngalaba nke ndị ahịa.
Ndị otu aka azụmaahịa nke nwere ndị injinia iri nwere nkà na-akwado ọrụ mba ofesi / ụlọ mgbe azụtara ahịa na ntanetị.
Adreesị: Building B, Kunxin Industrial Park, Nke 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425
Tẹ: + 86-760-87961168